Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Thigh Acne ချိုင်းနဲ့ ပေါင်မှာပေါက်တဲ့ ဝက်ခြံ
Thigh Acne ချိုင်းနဲ့ ပေါင်မှာပေါက်တဲ့ ဝက်ခြံ
Sun, Sep 1, 2013 at 4:16 PM
သမီးရဲ့ဂျိုင်းမှာ ဝက်ခြံလိုမျိုး အဖုလေးတွေရှိနေပါတယ်။ မဲမဲလေးတွေပါ။ ညှစ်လို့လည်းမရဘူးရှင့်။ မြုံနေသလိုပဲ။ အဲဒီအဖုလေးထဲမှာ အမွှေးငုတ်တိုလေးတွေလည်း မြင်နေရတယ်။ ပျောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင့်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပေါင်မှာလဲ အဲလိုအဖုလေးတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ပေါင်ကဟာတော့ ညှစ်လို့ရပါတယ်။ အမွှေးကော ဝက်ခြံလို အဆံလေးတွေပါ ထွက်လာပါတယ်။
ဝက်ခြံဆိုတာ မျက်နှာမှာပေါက်တယ်။ ဝက်ခြံနဲ့ ဆင်တူတာမျိုးက ချိုင်းနဲ့ ပေါင်တွေမှာလဲ ပေါက်သေးတယ်။ မျက်နှာမှာ ပေါက်တာကို Acne လို့ခေါ်တယ်။ တခြားနေရာမှာပေါက်တာကို Pimples လို့ခေါ်တယ်။ အဖြစ်မနည်းလှပါ။ ဒါပေမဲ့ အရေးမကြီးပါ။ မကုဘဲထားလို့ရတယ်။
•	Sweating ချွေးထွက်များခြင်း။ ပေါင်းအတွင်းပိုင်းဆိုတာ သိတဲ့အတိုင်းအမြဲလိုလိုဖုံးထားရလို့ ခွေါးများတယ်။ အပေါ်ကထွက်တဲ့ခွေါးစီးကျတာလဲ ခံရသေးတယ်။
•	Folliculitis ကိုယ်မွှေးထွက်အိတ်ကလေးတွေရောင်ခြင်း။ တင်ပါးမှာလဲဖြစ်တယ်။ ဗက်တီးရီးယားဝင်လို့ဖြစ်တယ်။ နာမယ်၊ ယားမယ်၊ ရောင်မယ်၊ ပြည်တည်မယ်။
•	Thigh Acne ပေါင်ဝက်ခြံ။ skin infection အရေပြားပိုးဝင်တာပါဘဲ။ ယောက်ျားတွေမှာ ကပ်ပဲ့အိတ်မှာဖြစ်တယ်။ ချွေးထွက်အိတ်တွေမှာ မဆင်မသင့်တာဖြစ်လာလို့ပါ။ အဆီပိုထွက်မယ်၊ ပိုးဝင်မယ်။ Blackheads ခေါင်းဖြူဝက်ခြံလို့လဲ ခေါ်တယ်။
•	Skin Creams အရေပြားလိမ်း ခရင်မ်တွေကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Moisturizer ကိုနေ့တိုင်းသုံးရင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ Water based moisturizers သုံးတာက ပိုသင့်တယ်။
•	Hormonal Changes ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ။ ရှောင်လဲမတာမျိုး မိန်းကလေးတွေမှာ များတယ်။ အရွယ်ရောက်ချိန်၊ ရာသီစက်ဝန်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ သွေးဆုံး။
•	အားကစားသမားတွေ၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်တယ်။ မျိုးရိုးလိုက်တာမျိုးလဲရှိတယ်။ ချွေးအပြင် ထိအားများတာခံရလို့လဲ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။
ဖြစ်တဲ့နေရာကို ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။ အပူချိန် မများစေနဲ့။ ရေ + ဆပ်ပြာနဲ့ သန့်ရှင်းရေး ပိုလုပ်ပါ။ ဆပ်ပြာမှာ Benzoyl peroxide ပါတာမျိုးကပိုကောင်းတယ်။ Benozoyl peroxide လိမ်းဆေးလဲရှိတယ်။ အဝတ်အစား ချောင်တာနဲ့ (ကော်တွန်) ဝတ်ဆင်ပါ။ အတွင်းခံပြောင်းပါ။
ပိုး (ဗက်တီးရီးယား) ဝင်ရင် ဒီဆေးတွေသုံးနိုင်ပါတယ်။
1. Tetracycline (တက်ထွာဆိုက်ကလင်း) ကို အများဆုံး သုံးတယ်။ တခါသောက် 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ ဘယ်လောက် ကြာကြာလဲဆိုတာ အတိအကျ ပြောမရဘူး။ သက်သာတဲ့အထိလို့ အကြမ်းပြောလို့ ရတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တခါသောက် 250 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် လျော့နိုင်တယ်။ ဆေးကို အစာမရှိချိန် သောက်တာ ကောင်းတယ်။ သတိထားဘို့က အသက် ၉ နှစ်အောက် နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို ဒီဆေးမပေးရဘူး။ အဆင်ပြေတာက ဒီလူမျိုးတွေက ဝက်ခြံဖြစ်တတ်သူတွေ မဟုတ်ကြပါ။
2. Erythromycin (အရစ်သရိုမိုင်စင်) ကိုလဲ သုံးနိုင်တယ်။ သူက (တက်ထွာဆိုက်ကလင်း) ထက်သာတာက ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်စဉ်အတွက် ပိုကောင်းတယ်။ အစားနဲ့လဲ သောက်လို့ရတော့ အစားကြီးတဲ့ ငယ်ရွယ်သူတွေနဲ့ ကိုက်တယ်။ တခါသောက် 250 - 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ ပျို့အန်ချင်တာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေလဲ ပေးနိုင်တယ်။
3. Minocycline ဆေးကို ပြီတည်နေချိန်မှာ သုံးရင်ကောင်းတယ်။ အစာနဲ့ဝေးရင် ပိုကောင်းတယ်။ တခါသောက် 50 to 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ ခေါင်းမူး၊ ပျို့-အန်၊ အရေပြားနဲ့ သွားညိုတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
4. Doxycycline (တက်ထွာဆိုက်ကလင်း) နဲ့ (အရစ်သရိုမိုင်စင်) သုံးလို့ မထူးခြားသူတွေကို ဒီဆေး ပေးတယ်။ တခါသောက် 50 to 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ အစာနဲ့လဲနီးလို့ ရတယ်။ ပျို့ချင်တယ်။ နေရာင်နဲ့ မတည့်ဘူး။
5. Clindamycin ဆေးကို တခါသောက် 75 to 150 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ သောက်ဆေးထက် လိမ်းဆေး အဖြစ်သုံးတာ များတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးကတော့ Pseudomembranous colitis, Clostridium difficile အူမကြီးရောင်တတ်တယ်။
ဘယ် Antibiotics ပဋိဇီဝဆေးမဆို အမျိုးသမီးတွေမှာ Candida vaginal yeast infections မွေးလမ်းကြောင်း မှိုဝင်တာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးရဲ့ အာနိသင်ကိုလဲ ထိခိုက်တတ်တယ်။ စိုးရိမ်စရာတော့ မဟုတ်ပါ။ ဖြစ်လာရင်လဲ ပျောက်ဘို့ဆေးက မခက်ပါ။